Teknolojia manohitra ny orinasa Pacific Partnership Trans - News Fitsipika
Teknolojia manohitra ny orinasa Pacific Partnership Trans
Fanoherana GROUP INTERNET Ady ho an'ny Hoavy (FFTF) dia boribory ny 29 teknolojia vaovao orinasa hanao sonia taratasy izay manohitra mafy andalan-teny ao amin'ny Trans Pacific Partnership (TPP) fifanarahana ara-barotra iraisam-pirenena.
Ny TPP dia fandaharana izay mankasitraka ny fanirian'ny orinasa lehibe iraisam-pirenena ny zavatra hafa. Raha izany no ankapobeny tohanan'ny orinasa sasany sy ny governemanta Amerikana, izany koa ny mpanohitra.
29 mpanohitra, anisan'izany DuckDuckGo, Boingboing, Fark, iFixit sy Reddit efa nomeko ny fanohanany ho an'ny FFTF fanentanana manohitra ny TPP, ary faly nanao sonia fifanekena ny hafatry ny mpanohitra.
Ny olana lehibe indrindra amin'ny naroso fifanarahana ara-barotra dia ny tolo-kevitra ho an'ny fikirakirana ny zon'ny mpamorona, ny fiainana manokana sy ny Patents, miaraka amin'ny zava-misy fa efa nifampiraharaha tamin'ny efa ho tanteraka tsiambaratelo.
Ny taratasy manontany US Senatera Ron Wyden tsy hamela shadowy antoko mba hibaiko aterineto fitsipika, ary mampitandrina fa manohana ny TPP ho manohitra ny tombontsoam-bahoaka.
“Ny hany azontsika atao Hanananao fanavaozana rafitra politika – izay manohana ny hevi-baovao, entana, sy ny tsena – raha ny dingana hanao ny mari dia misokatra sy ny fandraisana anjara. Indrisy, ny varotra no dingana fifampiraharahana na inona na inona, fa mangarahara. ny orinasa, ary ny mpampiasa izay tompointsika, Tokony ho teo amin'ny latabatra hatrany am-piandohana hanao ny mari politika izay manompo bebe kokoa noho ny tery ara-barotra tombontsoan'ny orinasa lehibe ny vitsivitsy izay efa nasaina handray anjara,” Nanoratra ny orinasa.
“Mamporisika anareo izahay mba tsy handeha misy dikan-Fast Track na ara-barotra fampiroboroboana ny fahefana, na hanaiky izay rafitra izay manamora ny andalan-teny ny fifanarahana ara-barotra misy fepetra fampiharana ny zon'ny mpamorona nomerika natao tao amin'ny manjavozavo, -varavarana mihidy dingana.”
Nifaranan 'ny taratasy izy ireo amin'ny filazana fa Senatera Wyden, tahaka ny seza ny US Antenimieran-doholona Komitin'ny Vola, dia eo amin'ny toerana mba hitandrina ny Etazonia amin'ny lohalaharana ny zava-baovao. M
Ity lahatsoratra ity, Teknolojia manohitra ny orinasa Pacific Partnership Trans, ny mpilaza vaovao avy amin'ny The manontany ary nandefa eto nahazoana alalana.
20150	2 Fast Track, iFixit, Ron Wyden, TPP, Trans Pacific Partnership, Trans-Pacific Economic Partnership Strategic, Etazonia, United States Komitin'ny Antenimieran-doholona ao amin'ny Finance
← Milina fanoratana ny vaovao Guinée MIEZAKA ny misy mahafaty valan'aretina Ebola →